A ga-enyefe OnePlus 6 na May 17 na China | Gam akporosis
Eder Ferreño | | China gam akporo, OnePlus
N'ikpeazụ! Ka izu nke asịrị banyere ọbịbịa nke OnePlus 6 na ahịa, anyị nwere data gọọmentị. Ekwenyela ụbọchị ngosipụta nke ọkwa dị elu nke akara ndị China. Izu ole na ole gara aga, ekwuru na a ga-ewepụta ya n'ọnwa Mee. Ihe emesiri gosiputa. Maka na anyị nwere mmemme maka etiti ọnwa Mee.
Kpọmkwem, na Mee 17, a ga-enyefe OnePlus 6 a na China. Mgbe izu nke ejighị n'aka na anyị mesịrị nwee ụbọchị ngosi ngosi maka njedebe dị elu. Ihe omume nke n’eme ka o doo anya na otutu olile anya.
Otu izu a asịrị bilitere na ha kwuru na ekwentị ahụ ga-agbapụ n'ahịa ụfọdụ dị n'Eshia na Mee 18. Ọ bụ ezie na akara ahụ ngwa ngwa kwuru na nke a bụ ụgha. Oge mbụ ha zutere. N'ikpeazụ, anyị nwere nkwenye gọọmentị.
A ga-eme ihe ngosi ngosi nke gọọmentị na China na Mee 17. Agbanyeghị, ọ gaghị abụ naanị mmemme ngosi nke ekwentị. Kemgbe onwa Mee 16 ka emebere mmemme ngosi ozo na London. Yabụ anyị ga-amata ngwaọrụ dị na Europe na mbụ, na ihe omume a anyị ga-enwe ike ịmata ihe niile gbasara OnePlus 6, ọ bụ ezie na anyị nwere ọtụtụ nkọwa gbasara ngwaọrụ a. Ọtụtụ ndị e kpughere site CEO nke ụlọ ọrụ onwe ya. Ma ha na-enyere anyị aka inweta echiche banyere njedebe dị elu.
Anyị maara na gị azu ga-eme nke iko. Ọzọkwa nke na-aga nwere notch na ihuenyo, nke nwere ike zoo ma ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ. Na mgbakwunye, ihe nhazi Snapdragon 845 na-echere anyị na OnePlus 6 a, ihe nhazi kachasị ike na ahịa taa. Na nkenke, njedebe zuru oke.
Ugbu a, Anyị ga-echere izu ole na ole ruo mgbe ngosi a nke ekwentị. Na onyonyo dị n’elu, ị ga-ahụ akwụkwọ mpịakọta ekpughere maka nkwupụta ya. N'ezie n'izu ndị a, a ga-enyocha nkọwa ndị ọzọ gbasara OnePlus 6. Tiketi maka ihe omume ga-aga ahịa na Eprel 27.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Kwadoro: A ga-enye OnePlus 6 na May 17 na China
Xiaomi Mi 6X bụ ọkwa ugbu a: Mara nkọwa ya niile
A kpughere ndị ahọpụtara ahọpụtara Google 2018 niile